‘लकडाउनले होटेल व्यवसायी थला परेका छन्’ - Tulsipur Online
‘लकडाउनले होटेल व्यवसायी थला परेका छन्’
Posted by Admin | १४ आश्विन २०७७, बुधबार १६:१९ |
कोरोना संक्रमणको समयमा सरकारले थालेको लकडाउनका कारण करिब ६ महिनादेखि होटलहरु बन्द हुँदा होटल व्यवसायीहरु मारमा पर्दै आएका छन् । खासगरेर यति बेला थोरै लगानीमा सञ्चालनमा आएका होटल व्यवसायीहरु अझ बढि प्रभावित भएका छन् । निषेधाज्ञा तथा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवागमन बन्द हुँदा र विभिन्न समयमा हुने सभा सम्मेलन पनि स्थगित हुँदा आयआर्जनको बाटो पनि बन्द हुन पुगेको छ । यस अवधीमा जिल्लाका धेरै होटल व्यवसायीहरु पनि सञ्चालन गर्न नपाउँदा विस्थापित हुनुपरेको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर तुलसीपत्रकर्मी सुशीला वलीले होटल व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं. पाँचका कोषाध्यष तथा दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपेन्द्र पुन मगरसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
करिब ६ महिनादेखि होटल व्यवसाय बन्द रहदा व्यवसायीहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
अहिले यो लामो समयसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण गर्दा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरनै यसको माहामारी फैलिरहेको अवस्थामा अहिले होटल व्यवसायीहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा घर भाडा र विभिन्न बैंक तथा सहकारी मार्फत ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई कसरी घर भाडा र बैंकको ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका छन् ।
जिल्लामा हालसम्म साना ठूला गरेर २५ सय बढी होटल व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरु रहेका छन् भने घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गत करिब १४ सयसम्म व्यवसायीहरु रहेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु थोरै लगानीमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेरै साँझ विहानको जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरु झनै मर्कामा परेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु आफनो व्यवसायनै बन्द गरेर विस्थापित भएको अवस्था छ ।
लामो समयसम्म होटल व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरु पक्कै पनि मारमा परेका छन्, यस्तो अवस्थामा के कदम चाल्नुहुन्छ ?
लामो समयसम्म बन्द रहँदा व्यवसाय समस्यामा परेको हुँदा हामीहरुले होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल मार्फत नेपाल सरकारलाई व्यवसायहरुको लागि सरकारले केहि न केहि सोच्नुपर्छ कमसेकम घर भाडा छुट तथा बैंकको ब्याज सहुलियतका विषयमा केहि गरिदिनुपर्छ भनेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं । तर त्यसको सुनुवाई पनि भएको छैन् । त्यसकारण व्यवसायीहरु मर्कामा छन् सरकारले केहि गरिदिएमा सहज हुने थियो ।
कतिपय जिल्ला बाहिरीका नागरिकहरु होटल व्यवसाय गर्नकै लागि दाङसम्म आएको र लामो समयसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा सबै समान बोकेर कोठा खाली गरेर हिडेका छन् । करौडांैको लगानी गरेर होटल सञ्चालन गरेका व्यवसायलाई कसरी बंैकको ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्ता छ भने थोरै लगानि मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकालाई जिविकोपार्जन गर्नै समस्या भएको छ ।
व्यवसायनै बन्द गरेर बस्नुपरेको अबस्थामा कति होटल व्यवसाय विस्थापित हुनुभएको छ ?
अहिले यति व्यवसायी विस्थापित भएको भन्ने एकिङ तथ्यांक राखिएको छैन । तर पनि करिब ५० बढी होटल व्यवसायिहरु विस्थापित हुन पुग्नुभएको छ । होटल सञ्चालनका लागि लिएको कोठा भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था शिर्जना भईसकेपछि छाड्नुको विकल्प छैन् । हामीले दाङ देउखुरी होटल व्यवसायि संघद्वारा जति पनि घर मालिकहरु हुनुहुन्छ घर भाडाहरुको केहि छुट दिनुपर्छ हामी व्यवसायी समस्यामा परिराखेका छौ ।
व्यवसायीहरु व्यवसाय गर्न नपाएर धरापमा परेको अवस्था छ । व्यवसायीहरुलाई एक छाक टार्न समस्या भएको अवस्थामा तपाईंहरुले पनि कमसेकम घर भाडा छुट गरिदिएमा केहि राहतको महशुस हुनेथियो भनेर हामीले घर मालिकहरुसंग कुराकानी गरिराखेका छौं । कतिपय मनकारी घर मालिकहरुले पनि छुट पनि गरि दिनुभएको छ । यसरी होटल व्यवसायीहरुको क्षेत्रमा राहत दिएको भन्दै भाडा छुट दिनुभएका घर मालिकहरुलाई सम्मान गर्ने पनि हामीहरुको दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी संघमा अनौपचारिक छलफल पनि भएको छ ।
यहा“ एउटा सम्पूर्ण होटल व्यवसायीहरुको अभिभावकको हिसाबले पनि यहा“हरु समक्ष व्यवसायीहरुले केहि समस्या राख्नुभएको छ की छैन ?
गुनासो समस्या धेरैले राख्नुभएको छ । अब हामीले के गर्ने हाम्रो विकल्प के हुनसक्छ भन्दै समस्या राख्ने गर्नुभएको छ । अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा जिल्लामा मात्र नभई विश्वभरनै कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको कलडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण होटल व्यवसायी मात्रै नभई अन्य व्यवसायी तथा अन्य निकायहरु पनि प्रभावित भएको हुँदा प्रभावित भएको हुँदा कमाई गर्नुभन्दा पनि यो संक्रमबाट कसरी सुरक्षित हुने र रोगलाई कसरी नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्नेमानै केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको छ । त्यसकारण एकातिर रोगसंग लड्नु छ भने अर्कोतर्फ भोकको जोहो कसरी गर्ने भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
व्यवसायीहरुले समस्या राख्नुहुन्छ तर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । सुरक्षित भएर बस्नु सबैभन्दा पहिले हामी बच्नुपर्छ पछि फेरी सहज वातावरण सिर्जना भयो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सहज हुनेछ भन्ने गरेको छु । व्यवसायीलाई भएको घाटा सिंगो दाङ देउखुरी होटल व्यवसायीलाई, प्रदेश पाँचलाई एवं राज्यलाईनै घाटा भएको छ ।
आमव्यवसायीहरुले यहा“हरु समक्ष समस्या राखिरहदा जुन सा“झ विहान छाक टार्नै समस्या भएका होटल व्यवसायीहरुको सन्र्दभमा राहत दिने कुराको विषयमा केहि सोच्नुभएको छ ?
हामीले यो विषयमा पनि सोचेका छौं । संघमा जति पनि व्यवसायहरु आवद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरुको दैनिकीनै समस्यामा पर्न थालेपछि संघ मार्फत केहित गर्नु प¥यो भन्नका लागि केहि प्याकेज ल्याउनुपर्छ । केहि राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर अनौपचारिक छलफल पनि भएको छ ।
अतिनै समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजना पनि रहेको छ । दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुद्रबहादुर डाँगी, महासचिव ईश्वर बुढालगायतको सिंगो टिमले अनौपचारिक रुपमा छलफल अगाडि बढाएका छौ ।
तपाई होटल व्यवसायी महासंघ प्रदेश नम्बर पा“चको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होटल व्यवसायीहरुका समस्याका बारेमा प्रदेशस्तरमा केहि भएको छ यहा“को ?
यो हाम्रो होटल व्यवसायी प्रदेश नम्बर पाँच गठन भएको पनि करिब–करिब दुई वर्ष पुग्नै आटेको छ । त्यसकारण हामीले कोरोना संक्रमणको सन्त्रासअघि प्रदेश पाँचको पर्यटन मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर व्यवसायीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गरेका थियौं ।
र लगत्तै हामीले अरु प्रदेशभरका होटल व्यवसायीहरुको हक र हितका लागि केहि मागहरु राख्नुपर्छ किने भने हामी पर्यटनसंग जोडिएको हुनाले प्रदेशभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचानका कुराहरु भएका थिए । तर यति बेला कोरोना माहामारीका कारण हाम्रा सबै योजनाहरु अपुरो रहेका छन् ।
अन्त्यमा के भन्न चाहान्छु भने मलाई हाम्रो व्यवसायको बारेमा यति बेला व्यवसायीहरुले भोग्नु परेका कुराहरुको बारेमा बोल्न दिनुभयो यो एकदमै महत्वपूर्ण समयका लागि तपाईलगायत तुलसीपत्र पत्रिका परिवारलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु !
Previousबुधबार सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँ बढ्यो
Nextसर्पदंश उपचार केन्द्रको प्रभावकारीतामा ध्यान दिऔं